Dagaal siyaasadeed oo u dhaxeeya Madaxweyne Dani iyo Gudoomiye Dhoobo Daarood – Walaal24 Newss
Dagaal siyaasadeed oo u dhaxeeya Madaxweyne Dani iyo Gudoomiye Dhoobo Daarood
Wararka aanu ka heleyno magaalada Garoowe ayaa sheegay in uu sii xoogaysanaya dagaalka siyaasadeed ee u dhaxeeya Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland iyo madaxweynaha maamulka Puntland oo haatan mid waliba uu doonayo awoodiisu ka dhax muuqato xildhibaanada Baarlamaanka Puntland gudahiisa.
Labada masuul oo uu ka dhaxeeyo khilaaf siyaasadeed oo aad culus ayaa kala ah mid walba uu doonayo awood siyaasadeed ku muquuniyo, waxaana madaxweyne Denni ayaa doonayo in xasaanada gudoomiyenimo laga qaado C/xakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daarood.
Siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada ugu dhow madaxweyne Denni oo caqabad xoogan u arka gudoomiyaha Baarlamanka Dhoobo Daarood, kooxda taageersan Dani waxaana tuurista gudoomiyaha ay u arkaan faa’iido xoogan maadaama uu hor is taag ku sameeyey mashaariic badan oo ay damacsan yihiin in ay ka fuliyaan gudaha deegaanada Puntland.
La wareegista garoomada magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe ayaa qayb ka ah mashaariicda haatan taagan, waxaana xukuumaddu ay faa’iido weyn ugu aragtaa tuurista Dhoobo Daarood in ay hirgalin doonaan mashaariicdaasi.
Xildhibaanada Baarlamaanka oo ku kala qaybsan aragtida labada dhinac ayaa mid walbaaba uu dhankiisa kawadaa abaabul xoogan oo uu ku wajahayo kan kale, gudoomiye Dhoobo Daarood ayaa intabadan awood kuleh Golaha Baarlamaanka Puntland.
Madaxweyne Denni ayaa xiligani xooga saaraya sidii uu kusoo xera galin lahaa xildhibaanada Baarlamaanka Puntland, waxaana xukuumaddu ay qorshaysay in wasaaradda Maaliyadda Puntland laga abaabulo mooshinka Dhoobo oo xildhibaankasta lagu bixiyo codkiisa lacag dhan ilaa 40 Kun oo Dollar si xilka looga tuuro Dhoobo.
Xildhibaanada qeyb ka mid ah Baarlamaanka Puntland ee kasoo jeeda deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa wada qorshe lagu dhex dhexaadinayo labada masuul, waxaase arintaasi kasoo hor jeestay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni oo xal u arka in jagada gudoomiyaha Baarlamaanka la gaadhsiiyo Dhoobo Daareed oo caqabad ku ah arimihiisa.
Kulamo kala duwan ayaa caawa ka socda Garowe, waxaana xaalku uu yahay mid xasaasi ah oo aan la sahalsan karin.
Sawiro: Dowladda Uganda oo deeq Raashin soo gaarsiiay dad danyar oo ku sugan Gobolka Shabeelaha Hoose